Firenena afrikanina voalohany nahazo vaksinin'ny COVID19 voalohany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Firenena afrikanina voalohany nahazo vaksinin'ny COVID19 voalohany
Ny kaonsily jeneraly sinoa ao Alexandria, Jiao Li Ying, dia nanamafy ny fampanantenan'ny fireneny fa Egypt dia ho anisan'ny firenena afrikanina voalohany handray tombony amin'ny vaksinin'ny COVID-19 novolavolaina sinoa rehefa vonona izany.
Ny konsily, tamin'ny 30 Jona, dia nanamafy ny fanoloran-tenan'i Beijing hiara-hiasa amin'i Kairo sy ireo renivohitra afrikanina maro hafa hiadiana amin'ny areti-mifindra coronavirus.
Ejipsianina mihoatra ny 75,000 no tratran'io aretina io, ary manodidina ny 3,000 no maty.
Talohan'izay, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tale jeneralin'ny World Health Organization, dia nanameloka izay nantsoiny hoe "fanamarihana fanavakavaham-bolon-koditra" nataon'ny fahitalavitra frantsay nataon'ny mpivady mpahay siansa nilaza fa tokony hosedraina any Afrika ny vaksinina vaovao.
Nilaza ny talen'ny WHO tamin'ny 6 aprily fa "gaga" izy ary "ireo karazana fanamarihana fanavakavahana" ireo dia tsy nanampy tamin'ny fotoana nilana firaisankina teo amin'izao tontolo izao.
Voampanga ho fanavakavaham-bolon-koditra tao amin'ny media sosialy ireo dokotera frantsay roa ireo.
Guy Burton, mpiara-miasa mitsidika ao amin'ny LSE Middle East Center ary mpampianatra mpiara-miasa amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny Vesalius College any Bruxelles dia nilaza tamin'ny The Media Line fa nifanaraka tamin'ny voalazan'ny filoha sinoa Xi Jinping herinandro vitsivitsy lasa izay nandritra ny fivoriana virtoaly miaraka amin'ireo mpitondra afrikanina.
"Ny firenena afrikanina sasany izay niara-niasa tamin'i Shina tamin'ny tetik'asa Belt and Road sy ny fampiasam-bola dia nanjary nanan-trosa na dia talohan'ny valanaretina COVID-19 aza," hoy i Burton nanamarika.
Nilaza i Xi fa hisy ny fanamaivanana trosa amin'ny sasany amin'ny fampindramam-bola sy ny fandaminana endrika hafa amin'ny trosa, hoy izy ary nanampy hoe: "Hitako fa anisan'ny fitoriana ity COOID-19 ity ny fiaraha-miombon'antoka amin'i China miaraka amin'ny fanampiana COVID-XNUMX."
Notohizan'i Burton: “Hatreto, tsy azoko lazaina raha efa nanao fikarohana sy fampandrosoana vaksinina tany amin'ireo firenena afrikanina ireo orinasa sinoa. Maromaro ny [ezaka toy izany] mitranga any Shina raha misy orinasa tsy sinoa hafa kosa nanao fikarohana tany Afrika. ”
Nanampy izy fa ny hetsika fampandrosoana mandroso indrindra dia toa ny nataon'ny ekipa iray tany Shina niaraka tamin'ny orinasa kanadiana iray, nilaza fa nisy ny resaka momba ny fanarahan-dia haingana azy io ho an'ny tafika sinoa.
Mikasika ireo dokotera frantsay izay nanombantombana momba ny fanaovana fikarohana sy fampandrosoana any Afrika, dia nilaza i Burton fa angamba izany satria mety misy fari-pitsipi-pitondran-tena malemy kokoa any.
"Vetivety dia haingana ny fanakianana, saingy nisy ihany koa ny mpandinika sasany nanasongadina fa mety ilaina ny fanaovana fitsapana any Afrika noho ny karazan-karazan-javatra sy ny vokany mety hisy eo amin'ny vondron'olona sy tontolo samihafa ao," hoy izy. .
Raha eo amin'ny famolavolana vaksinin'ny COVID-19 dia vitsy ny orinasa mavitrika sy mizaha toetra any Afrika raha oharina amin'ny toeran-kafa manerantany.
"Egypt sy Afrika atsimo angamba no fonenan'ny ankamaroan'izy ireo," hoy izy.
Nilaza i Burton fa mbola tsy mazava ny fisian'ny vaksinina sinoa ho an'ny firenena afrikanina malalaka.
“Heveriko fa i Beijing dia mijery ny valin'ny amerikanina, izay nahazo tsikera tato anatin'ny volana vitsivitsy, izay nilazan'izy ireo fa raha mahazo vaksininy dia hataon'izy ireo laharam-pahamehana ny famokarana sy ny fampiasana azy ao an-trano fa tsy ny hamelana azy ho an'ny rehetra,” hoy izy.
Hitan'ny filoha sinoa sy ireo mpanolotsainy fa afaka mahazo isa mora amin'ny firenena hafa izy ireo amin'ny fanomezana vaksininy maimaim-poana na amin'ny vidiny, hoy ihany izy.
"Raha miverina amin'ny fiandohan'ny taona 2017 ianao, Xi Jinping dia nahazo tehaka maro tamin'ny fanehoana an'i Shina ho mpiaro ny fanatontoloana, mifanohitra amin'ny fihetsiketsehana mpiaro an'i Trump Administration sy ny toetran'ny" America First "," hoy i Burton.
Ny konsily sinoa ao Alexandria dia nanampy tamin'ny fanambarana an-gazety navoaka tamin'ny faran'ny volana jona: "Andro vitsy lasa izay, ny Fihaonamben'ny firenena China-Africa momba ny firaisankina amin'ny COVID-19 dia natao an-tserasera teo imason'ny filoham-pirenena sinoa, Xi Jinping, ilay Ny filoha egyptiana, Abdel Fattah el-Sisi, ireo mpitarika hafa any amin'ny firenena afrikanina, ary ireo fikambanana iraisam-pirenena hiady hevitra momba ny drafi-piaraha-miasa manohitra ny valanaretina ary hampiroborobo ny fifandraisan'ny mpirahalahy amin'i Sina sy Afrika, ary io fihaonambe io dia misy heviny lehibe. "
Ny fanambarana an-gazety dia nanamarika fa i China dia nanolo-tena hanome fanampiana ara-pitaovana sy manam-pahaizana momba ny fitsaboana any amin'ny firenena Afrikana, ary manampy azy ireo amin'ny fividianana fitaovam-pitsaboana avy any Shina. Nanamarika ihany koa ny masoivoho fa hanomboka ny fanamboarana ny fireneny amin'ity taona ity ao amin'ny foiben'ny Ivon-toerana Afrikana misahana ny aretina amin'ny Addis Ababa, Ethiopia, mialoha ny fandaharam-potoana.
Mahmoud al-Sharbene, mpikatroka mafàna fo ara-politika ejiptiana iray, nilaza tamin'ny The Media Line fa nahitana fahasahiranana tamin'ny fiatrehana ny valan'aretina COVID-19 manerantany ny fireneny amin'ny fiatrehana ny isan'ny olona voan'ny aretina sy ny fikambanan'olona mikarakara hisorohana ny fihanaky ny aretina.
Nanao izay ho afany ny mpitsabo, hoy izy, saingy teren'ny loharano malemy sy voafetra.
“Heveriko fa tsy hanana andraikitra amin'ny famolavolana vaksiny i Egypte ankoatry ny fitsapana azy amin'ny olom-pirenena, ary ny momba ny vaksinina vaovao, alohan'ny hitsapana azy amin'ny olona, ​​ny olana sy ny endrika mampiavaka azy dia tsy maintsy ambara mialoha, ankoatr'izay loza mety hitranga miaraka aminy, ”hoy i Sharbene.
Nanampy izy fa ny fampanantenan'ny fiaraha-miasa sinoa dia mety hamboarina mba hampitony ny olona aorian'ny fitomboan'ny aretina mahery vaika, "indrindra satria i Sina dia nanao fampanantenan-tsaina toy izany tamin'ny firenena maro hafa."
Nanamarika i Sharbene fa ny isan'ny hopitaly dia tena voafetra raha oharina amin'ny 100 tapitrisa ny isan'ny mponina ao Egypt.
"Ny fiaraha-miasa amin'ny antoko manohitra ny coronavirus dia ho iray ihany, satria tsy hanana anjara toerana lehibe i Kairo," hoy izy.
Mpanoratra: DIMA ABUMARIA an'ny themedialine